About Us - Zhejiang Feileisi elektrika Co., Ltd
Auto Wiring fiadiana
Manao zavatra amin'ny fomba hafa kely, ary izany no fomba toy izany!
Zhejiang Feileisi elektrika Teknolojia Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2008, dia matihanina mpanamboatra ny fiara ny fifandimbiasana, flashers, Switches, Sela Mpandray Hafanana, DC contactor, wiring fiadiana sy ny fiara hafa herinaratra vokatra.
Ny orinasa nandalo ny ISO / TS16949: 2009 toetra rafitra fanamarinana tamin'ny 2015. nandalo ny vokatra maso ao amin'ny Ningbo faritra fiara fitiliana foibe, nahazo SGS-ROHS fanamarinana, Vondrona Eoropeanina AK ary nangataka taratasy fanamarinana ny vokatra am-polony Patents.
Ny orinasa "FOOCLES" marika, "FEILEISI" marika vokatra, dia tarehy noho ny milamina tsara kalitao sy ny vola lany-mahomby eo an-tsena. Efa naondrana any Eoropa, Amerika, Moyen-Orient, Azia Atsimo sy ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'ny ezaka rehetra Nifanesy koa ny tehina, ilay "FOOCLES" Brand dia fanta-daza ao amin'ny orinasa fiara elektrika tsikelikely.
Amim-pitiavana ny namana tonga soa avy amin'ny manerana izao tontolo izao tonga mitsidika ny orinasa, hifampiraharaha raharaham-barotra, fiaraha-miasa ara-teknika manamafy orina isika, dia ho faly hanompo anao.
ary ny maso fitsipika, nanamarika, famonosana, fitehirizana sy ny fitehirizana ny tanjona ankapobeny ny fifandimbiasana ho an'ny fiara. Izany fitsipika mihatra amin'ny fiara DC milina faritra fifandraisana herinaratra ny fifandimbiasana (anisan'izany ny plug-in smal ...
E-Address Zhejiang FEILEISI herinaratra TECHNOLOGY CO., LTD.
Telephone: + 86-577-61755310